ANSSI gbara mbọ ịkwalite ọbụbụeze dijitalụ EU n'oge PFUE
ANSSI ga-arụkọ ọrụ, yana Ministri maka Europe na Ofesi, iji wusie nhazi European Union ike n'oge nnukwu nsogbu cyber.
Nnukwu mwakpo cyber nwere ike inwe mmetụta na-adịgide adịgide na obodo anyị na akụ na ụba anyị n'ọtụtụ Europe: yabụ EU ga-enwe ike ịkwado maka ime ihe omume dị otú ahụ. Otu netwọk nke ndị ọchịchị na-ahụ maka njikwa nsogbu cyber (CyCLONE) ga-ezute na njedebe nke January, site na nkwado nke European Commission na ENISA, iji kwurịta ihe ịma aka nke nnukwu nsogbu kpatara na otu esi etolite na kwalite usoro nkwado na nkwado n'ime EU. Nzukọ a ga-abụkwa ohere iji nyochaa ọrụ nke ndị na-eme ihe nkiri na-atụkwasị obi nwere ike ịrụ, gụnyere ndị na-ahụ maka ọrụ cybersecurity, n'ịkwado ikike gọọmentị na ihe omume nke nnukwu mwakpo cyber.
Nzukọ nke netwọk CyCLOne ga-abụ akụkụ nke usoro mmega ahụ nke ga-agụnye ndị ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Europe na Brussels na nke ga-achọ ịnwale nkwupụta nke ime na mpụga akụkụ nke njikwa nsogbu cyber n'ime EU.
ANSSI ga-arụkọ ọrụ yana European Commission
ANSSI gbara mbọ ịkwalite ọbụbụeze dijitalụ EU n'oge PFUE Ọnwa Abụọ 24, 2022Tranquillus
GỤỌ HR Innovation 2021 - Nchịkwa ndị ọrụ na-arụ ọrụ: iwu gbasara ọrụ ike maka ọrụ HR dị mfe kwa ụbọchị
gara agaMmasị na ahịa mpaghara
-esonụNgwa kọntaktị asụsụ Oriental: Chinese